Qubanaha » Madaxweynaha oo balan qaaday in isbedel weyn laga dareemi doono Muqdîsho.
Madaxweynaha oo balan qaaday in isbedel weyn laga dareemi doono Muqdîsho.
Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa wuxuu sheegay in muddo afar sano gudahooda ah xamar laga dareemi doono isbedel ballaaran oo ku aadan dhanka horumarinta caasimadda iyo dhanka nadaafadda.
Farmaajo oo xalay ka hadlaayay xaflad lagu qabtay Aqalka dowladda hoose ee Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay inay ka go’an tahay soo celinta bilicdii ay lahaan jirtay Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhibaatada Qabyaaladda leedahay, waxa uu ummadda Soomaaliyeed u soo jeediyey in ay ka fogaadaan Qabyaaladda. Waayo Qarankeenna ma dhiso ee waa uu dumiyaa.
“Fadhiga ha laga kaco, dowladda diyaar ayeey u tahay in ay awood siiso dhallnyarada Soomaaliyeed, dowladda iyo shacabka ma doonayo in dhexdeena la gelo, si midnimadeena muuqata aan u xoojinn idinkana sii wada taageerada dowladdiina aad u heysaan, caasimadda Soomaaliya afarta sanno gudaheed waxaa naga go’an inaa ka soo saarno magaalada Africa ugu quruxda badan uguna nadaafadda badan, sidoo kalena aan ka shaqeyno hirgelinta adeegyadiii bulshada, shacabka Somaliyed xoogga haa saaraan sidii aan uga guuleysan lahayn kooxahaan nabadda diiddaan, dhowaanna dalka oo dhan ayaaan ka saareynaa.” Ayuu yiri Madaxweynaha Jamhuuriyadda.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa ugu baaqay shacabka in ay bixiyaan canshuurtaa, laakiin waxa uu xusay in magaca canshuur la badeli doono haddii uu Barlamaanka ogollaado oo aan u bixinno Qaaraan Qaran.
“Saddexda bilood ee aan joogno waxaan qabannay, inaan bixinay mushaaraadka ciidammada iyo shaqaalaha Rayidka ee dowladda, waxaan bilowney inaan soo celinay Karaamadii ummaddeenna oo dalalka adduunka dhan ay noo muujiyeen in ay diyaar u yihiin u istaagidda wax wada qabsi buuxa, shacabka Soomaaliyeed dowladdaan waa middii shacabka, ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa magaalada markaa aragtaan meel walbaa wasakh ayaa taalla, waxaan bilaaabeynaaa ololaha dalkaaga wax u qabso, bishii laba saac kaliyah arrintaan aan ka shaqeynno anigaana bilaaabaya INSHA ALLAH, waxaan kaloo soo jeedinaayaa in maalinta 15-ka May loo asteeyo Maalin Qaran oo fasax ah.” ayuu ku dhammeeyey madaxweynaha hadalkiisa.